Tontolon’ny fitsarana : Nanatanteraka fianianana ny PGCS vaovao Andriatianarivelo René José - Triatra 21 juillet 2018 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil NEXTHOPE Tontolon’ny fitsarana : Nanatanteraka fianianana ny PGCS vaovao Andriatianarivelo René José –...
Lanonam-pitsarana goavana no nitranga tetsy amin’ ny fitsarana an-tampony omaly, izay nanatanterahan’ ireo tompon’andraikitra anivon’ny sampam-pitsarana isanisany fianianana, ary anisan’izany ny mpitsara ambony anivon’ ny fitsarana an-tampony vaovao Andriatianarivelo René José. Nambaran’ ity PGCS vaovao ity tamin’ izany fa laharam-pahamehana ny famerenana ny toeran’ny fitsarana imason’ ny rehetra, ary izay rahateo no hiompanan’ny asa izay ho sahaniny. Ny minisitry ny Fitsarana izay nanatrika ny lanonana moa dia nilaza ihany koa fa efa nandalo teo anivon’ ny CSM na ny filankevitra ambonin’ny mpitsara ny fanendrena azy ireo, ka avy hatrany dia hiroso amin’ ny asany ireo tompon’andraikitra isanisany ireo. Ankoatra ny PGCS dia anisan’ny nanatanteraka ny fianianana ihany koa ny filohan’ny filankevi-panjakana eo anivon’ ny fitsarana an-tampony dia Ratovonelimalala Denis, ny mpitsara ambony eo anivon’ny fitsarana fampakarana ao Tomasina sy Toliara ary Fianarantsoa, ireto farany izay mbola hapetraka amin’ ny fomba ofisialy any amin’ny toerana izay hiasany avokoa. Ny PGCS noho izany no mijery sy miantoka ny fanenjehana izay misy eo anivon’ny rafi-pitsarana, ary ny PGCS ihany koa no mampihatra ny fanenjehana eo anivon’ny « Haute Cour de justice’’. Anjara asany noho izany ny mijery sy manara-maso raha toa ka voahaja avokoa ireo pitsopitsony araka ny lalànan’ny paikady heloka.